Usekubhaceni umsebenzi kaMasipala osolwa ngokukhwabanisa | Eyethu News
Usekubhaceni umsebenzi kaMasipala osolwa ngokukhwabanisa
“UMasipala uthi asikho isidingo sokuthi uvulele lomsebenzi icala.”
UXOSHIWE: UBabazane Zindela osephelelwe umsebenzi emuva kokuvele abaleke ngoba esaphenywa ngumasipala.
UGCINE ephelelwe itoho owabe ephethe uMnyango wokuKhishwa kwemisebenzi kumasipala waseZinqoleni.
UBabazane Zindela ubesengumsebenzi kumasipala waseRay Nkonyeni njengalokhu lomasipala waseZinqoleni sewahlangana nowaseHibiscus Coast.
Ngemuva kophenyo olwenziwa iphephandaba i-Ugu Eyethu kanye nomasipala lensizwa ikhonjwe indlela ngemuva kokuba kube nezinsolo zokungasebenzisi kahle izimali kanye nokungalandeli imithetho efanele uma kunikezwa ithenda.
Kuthiwa uBabazane wanele wezwa ukuthi uyaphenywa ngumasipala wavele wadla phansi wangabe esalubhada emsebenzini. Lokho okuthiwa kwaholela ekutheni umasipala ubone ukuthi akusekho abasangakwenza bamkhomba indlela.
Leli phephandaba lihoshe umoya wokuthi kumanje usekubhaceni ngoba usaba ukuthi kuzomele abhekane namacala okweba nokukhwabanisa.
Umcwaningi mabhuku waveza ukuthi kunemali engangama-24 ezigidi zamarandi(24 million) owabe ungasetshenziswanga ngendlela.
Kuthiwa izinkampani ezimbili zakhokhelwa imali engama-12 ezigidi zamarandi ngayinye yangalandelwa imigudu efanele yokuqoka inkampani efanelwe ukuthola ithenda.
Ngenyanga kaNovemba iphephandaba laphenya mayelana nehholo laseZinqoleni endaweni yaseMlozane lapho amalunga omphakathi ayesabisa ngokulishisa.
Umphakathi wabe ukhala ngokuthi lelihholo kwakuthiwe lizokwakhiwa ngemali engama-4,6 ezigidi zamarandi kodwa labe lifana nexhiba.
Kwatholakala ukuthi lelihholo labe linemiveve, kunamafasitela afile futhi lingabiza cishe imali yokwakha indlu enamagumbi amane.
Kwaphinde kwatholakala ukuthi indaba yalelihholo yabe ingekho ngisho nasembikweni wonyaka wamasipala.
Lomnumzane kwavela nemibiko yokuthi walahlekelwa imali eyiz-2 zezigidi zamarandi edlini okwathiwa yabe intshontshwe isinqandamathe sakhe. Okuthiwa wathi uma eyifuna intombi yathi qonda kwabakasidlodlo kodwa wagcina engayanga.
Okhulumela umkhandlu uSimon April uqinisekisile ukuthi umasipala awusadlelani noZindela.
“Ngokuhlonipha ilungelo lomsebenzi angeke sikwazi ukusho ukuthi yiziphi izizathu ezense wakhonjwa indlela, kodwa ngingaqinisekisa nje ukuthi umasipala okhombe lendoda emnyango,” kuphetha u-April.
USimon uphinde wathi alikho icala elizovulelwa uBabazane njengoba isidingo salokho singekho.
Bakhishwe phambili abebesolwa ngokudayisa insangu esikoleni